Chombo anokurudzirwa kudzinga veMDC- T - The Zimbabwean
Chombo anokurudzirwa kudzinga veMDC- T
Bato rinomiririra vamiririri vemapato ezvematongerwo enyika mukanzuru, reElected Councilors Association of Zimbabwe rinoda kuti vamiririri veMDC mukanzuru vadzingwe basa sezvo vakundikana kumiririra zvido zvevanhu.
Bato reECAZ rinoti kutsigirwa kwevamiriri ava mukanzuru asi ivo vakadzingwa mubato nemhosva yehuori kunoratidza kuti gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo havavimbike.
Mutsamba yakanyorerwa vaChombo musi wa4 Gunyana 2012 ikatsinhirwa nemunyori wesangano iri anoona nezvemitemo, vaT Madamombe, ECAZ inoti mhinduro yavaChombo mukudzingwa basa kwevamiririri ava nebato reMDC- T haigutsi.
”Kutsigira vamiririri ava kuti vasasiye basa kunokatyamadza sezvo achifanira kuongorora kuti mari dzinotererwa neruzhinji dzadzoswa.
Zvinozadzisa pfungwa dzeveruzhinji dzekuti munoda vamiririri vane huori kuitira kubatsiridza mabhizimisi ehuori,” chinoverenga chikamu chetsamba iyi.
ECAZ inoti segurukota rinomiririra matunhu ose munyika, vaChombo vaifanira kutangira bato reMDC kuyanika pachena nyaya dzehuori sezvo vaine ruzivo maererano nenyaya idzi.
Vakapokana nepfungwa yavaChombo yekuti kudzinga basa vamiririri vemapato ezvematongerwo enyika mukanzuru harisi basa rinoitwa nedare remakurukota ehurumende sezvo vaive vadzinga basa vamwe vamiririri pasina kuwirirana nedare iri.
“Kutanga, tipei mutsauko uripo pakati pesungano inoitwa negukurukota rehurumende neinoitwa nedare remakurukota ehurumende? Kana paine mutsauko, sezvazvinofanira kuve, buritsai pachena nhaurwa dzakaitika dzose dzinotsigira kuti makapiwa mvumo yekudzinga basa vose vamiririri vemapato ezvematongerwo enyika vakasiya basa munyika yose kubva gore ra2000?” vakadaro.
Vakapa vaChombo mhosva yekudzivirira kugadziriswa kwemutemo unoona nezvenharaunda vachinomhan’ara kumatare, kuiitira kuchengetedza zvido zvavo.
“Panzvimbo yekutsigira makurukota nevamiririri vakasiyana siyana muhurumende mukukurudzira kuvimbika nekubata basa nemazvo mukanzuru, makasarudza kuenda kumatare, zvinoratidza ruzhinji kuti pane zvakashata zviri kuitika mumafambisirwo emabasa muhurumende.”
Sangano iri rinoti vaChombo vanofanira kuona kuti basa rafambiswa nemazvo mumatunhu akasiyana siyana kuitira kuti ruzhinji rugutsikane nemashandiro ekanzuru pachinzvimbo chekupindira mumashandiro avo.
Mwedzi wapfuura, MDC yakadzinga vamiririri vayo mukanzuru gumi nevaviri munzvimbo dzakasiyana- siyana zvichitevera kupomherwa mhosva dzehuori, dzaiongororwa nebazi raitungamirirwa nemutevedzeri wemunyori mubato iri vaTapiwa Mashakada.
Zvisinei, VaChombo vakaramba kudzinga vamiririri ava kubva muzvigaro zvavo vachiti bato reMDC raive raita chisungo charo kubato, chisinei nemafambisirwo emabasa mukanzuru. Mutori wenhau akakundikana kuwana mashoko kubva kuna vaChombo pamusoro penyaya iyi.